लकडाउनका बेला विवाद र ट्रोलको सिकार बन्ने बलिउड सेलिब्रेटी को को ? « Khabarhub
लकडाउनका बेला विवाद र ट्रोलको सिकार बन्ने बलिउड सेलिब्रेटी को को ?
हुनत बलिउड सेलिब्रेटी प्रायः सँधैजसो चर्चामा नै रहन्छन् । अक्सर उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा हेटर्सको ट्रोलको पनि सामना गर्नुपर्दछ । तर लकडाउनका बेला पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केहि सेलिब्रेटी विवादमा आएका छन् ।
कुनै पार्टी, इभेन्टमा नगई पनि घर बसिबसि विवादमा परेका सेलिब्रेटी को को हुन् ?
लकडाउनका बेला बलिउड अनिनेत्री अनुष्का शर्माको प्रोडक्सनमा बनेको वेब सीरीज पाताल लोक रिलिज भएको थियो । यस सीरीजलाई मानिसहरुले अत्यन्त रुचाएका थिए । तर पनि यो ट्रोलको सिकार भयो । शोको केहि दृष्यमा नेपाली भाषीप्रति र जातियतामा प्रहार गरेको भन्दै मुद्दा नै दर्ता भयो । अनि प्रोड्यूसर अनुष्का शर्माको ट्रोल बन्यो ।
एकता कपुरको वेभ सीरीज एक्सएक्सएक्स २ (XXX 2) मा आर्मी युनिफर्मको अपमानको आरोपमा उनको ट्रोल बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा एकताका हेर्टसले ट्रोल सेयर गरेका हुन् । बिगबोस फेम हिन्दुस्तानी भाऊले एकता र शोभा कपुरविरुद्ध उजुरी नै दर्ता गराए । भारतमा यस सीरीज र एकताको विरोध भएको छ ।
लकडाउनको समयमा भारतीय टेलिभिजनका सिरियलमा संस्कारी बुहारीको छबि बनाएकी देवोलीना भट्टाचार्जी पनि विवादको घेरामा परेकि छन् । कलाकार मयुर बर्माले साइबर सेलमा देवोलीनाले आफ्नो करियर र इमेजमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै उजुरी गरेका थिए ।
देवोलीनाले मयुरलाई मजाक बनाइएको एक तस्वीरलाई ट्विटरमा लाइक गरेकि थिइन् । जसलाई देवोलीनाका हेर्टसले ट्रोल बनाए ।
अनुराग बसु अर्थात पार्थ समथान
भारतीय टेलिभिजनको चर्चित सिरियल कसौटी जिन्दगीकी २ का पात्र अनुराग बसु अर्थात पार्थ समथानको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
जसमा उनी पुल पार्टीमा देखिएका छन् । भिडियो भाइरल भएपछि पार्थको ट्रोल शुरु भएको छ । हुन चाहिँ भाइरल भिडियो लकडाउन अघिको हो वा पछिको हो त्यसबारे भने यकिन गरिएको छैन ।
भारतीय टिकटक आर्टिस्ट फैजल शेख पनि विवादित भिडियोका कारण कैयौं ब्यक्तिको निशानामा परेका छन् । फैजलविरुद्ध एक वकिलले उजुरी दर्ता गराएका थिए । वकिलको आरोप थियो कि फैजलको भिडियो घरेलु हिंसा र महिलाको शोषणलाई बढावा दिने खालको छ । सोहि भिडियोका कारण फैजलको चर्को अलाोचना भएको थियो ।
टिकटक आर्टिस्ट फैजल सिद्दीकीको पनि भिडियो विवादमा परेको छ । उनले एक भिडियो सेयर गरेका थिए । जसमा उनले एक युवतीको अनुहारमा लिक्विड फ्याकेका थिए । जसमा युवतीको अनुहार बिग्रिएको देखाइएको थियो । फैजल माथि एसिड आक्रमणलाई बढावा दिने आरोप लागेसँगै उनको चर्को विरोध भयो र अन्ततः उनको एकाउन्ट नै डीएक्टिभ भयो ।
प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार ११ : ४९ बजे